मोटी केटीलाई बिहे गर्दा फाइदै-फाइदा ! « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मोटी केटीलाई बिहे गर्दा फाइदै-फाइदा !
एजेन्सी । अहिले त ट्रन्ड नै चलिसकेको छ कि, पातलो ज्यान भएकी केटी मात्रै सुन्दर हुन्छिन् भन्ने । त्यसैले हरेक केटाको रोजाइमा पातलो ज्यान भएकी केटी नै पर्छिन् । तर आज हामी यस्तो सत्यताबारे बताउँदै छौं, जो जानेर तपाई अविवाहित हुनुहुन्छ भने मोटी केटीसँग बिवाह गर्न मनाही गर्नुहुने छैन।
मोटी केटीसँग विवाह गर्नुका धेरै फाइदा छन्। यसको पहिलो फाइदा हो, मोटी केटीसँग बिवाह गरेपछि सपिङमा तपाईको पैसा खर्च हुने छैन। किनभने मोटी केटीहरु कपडाका बारेमा धेरै सौखिन हुँदैनन्।
अर्को फाइदा के भने मोटी केटीहरु पातलो ज्यान भएकी केटीको तुलनामा मनले धेरै सफा हुन्छन् । मोटी केटीको मनमा कसैपृति घृणाभाव हुँदैन । साथै मोटी केटी आफ्नो ससुराली पक्षका व्यक्तिको धेरै ख्याल राख्छिन्।
वैज्ञानिक खोजबाट पनि यो पत्ता लागेको छ कि, मोटी केटीसँग बिवाह गर्ने केटाहरु जीवनमा धेरै खुसी हुन्छन् । यदि तपाई खानपिनमा शौकीन हुनुहुन्छ भने पनि मोटी केटीसँग विवाह गर्नुको फाइदा हुन्छ । किनकी मोटी केटीहरु पनि खानपिनका लागि धेरै शौकीन हुन्छन्।एक अनुसन्धानबाट यो पनि पत्ता लाग्यो कि मोटी महिला आफ्ना पतिलाई धेरै माया गर्छन् । उनीहरुका लागि श्रीमान् नै सबैथोक हुन्छन् ।
यस्तै मोटी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषहरुमा आत्मको विकास हुने पनि एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । उनीहरु हरेक अप्ठेरो समयको सजिलै सामना गर्नसक्ने हुन्छन्। यस्तै मोटी केटी आज्ञाकारी पनि हुन्छन् । जसले गर्दा श्रीमतीले श्रीमानको भनेको कुरा सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण बन्छ । यस्तोमा पति–पत्नीबीच झगडा हुने संभावना पनि निकै कम हुन्छ ।
पितृको स्मरणमा पदमार्ग निर्माण
२८ कात्तिक – आफ्ना पितृ (पुर्खा)को स्मरणमा सन्तानले सप्ताह पुराण लगाउँछन् । दान दिन्छन् र
देउसीभैलोको रकमबाट प्रतीक्षालय
२६ कात्तिक – तिहारमा खेलेको देउसीभैलोबाट सङ्कलित रकमले बागलुङ जिल्लाको बडीगाड गाउँपालिका–२ खर्वाङ बजारमा रु